Eyona bhanya-bhanya ye-mafia intle: zithini? EHLAZIYIWEYO 2018 | Ndinike ixesha lokuphola
UGabriela moran | | Cine, ICinema yesenzo, Cinema ngohlobo, ngokubanzi
Las Iimuvi zeMafia zivuse inqanaba eliphezulu lomdla kubaphulaphuli bamanye amazwe. Kwiziza sifumana indibaniselwano enomtsalane igcwele ihlazo kunye nesenzo. Ngaloo nto kubhekiswa kwimiba enje ngokurhweba ngabantu ngokurhweba, ukungqubana phakathi kwamacala ahlukeneyo kunye nobuchule obukhulu bokuphumeza izicwangciso ezingaphandle komthetho omiselweyo. Izihloko ezikhulu zokuqhuma kwiscreen esikhulu! Kungenxa yoko le nto kulo lonke eli nqaku sibhengeza ukhetho lwethu ngeefilimu eziphambili ze-mafia zexesha lonke.
Iziza azibonisi naliphi na intsomi: zibonisa ubunyani obukhohlakeleyo obukhoyo kwimibutho mafia kwaye ubangqongile. Nangona kunjalo, amabali asizalisa nge-adrenaline kunye ne-intrigue ngokusebenzisa abalinganiswa be-eccentric abathanda ukunethezeka, amandla kunye nokunyoluka. Qhubeka ufunda ngamabali abaluleke kakhulu aphuculwe luhlobo lwefilimu!
Ukuthengisa ngokungekho mthethweni lulwaphulo-mthetho: iimpahla ezingekho mthethweni ziye zahluka ngokuhamba kwexesha nakwiindawo zonke. Icuba, utywala kunye neziyobisi zokwenziwa zibandakanyiwe kuluhlu lwezinto zorhwebo zohlwaywa ngawo onke amaxesha ahlukeneyo. Kukho imibutho ezinikele ekurhwebeni ngabantu kwanabantu!
Ngenxa yokuntsonkotha kwemisebenzi, izaphuli-mthetho ziququzelela ngokwamaqela zilawulwa zizikhokelo ezingagungqiyo. Kungenxa yoko le nto ii-mafia ziyimbali ziye zenziwa ngokuhamba kwexesha. Njengomzekelo sifumana I-Italiya, isiRashiya kunye neJapan mafia phakathi kwezona zaziwayo. Kwelinye icala, i Ilizwekazi laseMelika linamanethiwekhi amaninzi ulwaphulo-mthetho olulungelelanisiweyo, olukhuthaze uninzi lweemovie ze-mafia.
Phakathi kwezihloko ezivelise abaphulaphuli abaninzi kumabala emidlalo bhanyabhanya, sifumana oku kulandelayo:
1 U-Godfather (Icandelo I, II, III)
2 Ipulp engeyonyani
5 Izinto ezingafunekiyo zikaEliot Ness
7 Ezinye iiNdawo eziCetyiswayo zeMafia
U-Godfather (Icandelo I, II, III)
I-classic ye-cinematic eneendlela ezimbini. Lulungelelwaniso lwenoveli kaMario Puzo kwaye lwalukhokelwa nguFrancis Ford Coppola owaziwayo. Ifilimu yokuqala ye-trilogy yaphumelela i-Oscar ngeyona bhanyabhanya ibalaseleyo yonyaka. Yakhishwa ngo-1972 kwaye inkwenkwezi kaMarlon Brando, uAl Paccino, uRobert Duvall, uRichard Castellano noDiane Keaton.
"The Godfather" Ubalisa ibali lendlu yaseCorleone: Yenziwe lusapho lwase-Italiya-lwaseMelika oluphakathi kweentsapho ezintlanu ezibaluleke kakhulu zeCosa Nostra yaseNew York. Olu sapho lukhokelwe nguDon Vito Corleone, onxulumene nemicimbi yemafiya.
Ibali kubaliswa kwakhona kwinxalenye yesibini neyesithathu ezakhutshwa ngo-1974 nango-1990 ngokulandelelana. Usapho loonyana abathathu kunye nomfazi. Kwezinye zazo kubalulekile ukuqhubeka neshishini losapho, nangona kunjalo abanye abanamdla. Ngokwesiqhelo sifumana uDon Vito esebenza kunye nosapho ukugcina ubukhosi bakhe.
Kuzo zonke iifilimu ezintathu sifumana ubudlelwane kunye Ukungqubana phakathi kweentsapho ezintlanu eziphambili eziyinxalenye ye-Mafia yase-Italiya-Melika nelawula lo mmandla. Ukongeza kwiiCorleones, sifumana usapho ITattaglia, iBarzini, iCuneo kunye neStracci.
Ngaphandle kwamathandabuzo, yinto trilogy ongaphoswa yiyo! Iifilimu zakhe ezintathu ziphakathi kweyona midlalo idumileyo neyaziwayo kwilizwe liphela. Ngo-2008, kwabekwa kwindawo yokuqala kuluhlu lweeMovie ezingama-500 zeLona xesha liBalaseleyo., Yenziwe ngumagazini i-Empire.
Ngenye yeemveliso ezibonisa kakhulu uQuentin Tarantino, yakhutshwa ngo-1994 kwaye ithathwa njengeyona bhanyabhanya ibalaseleyo kule minyaka ilishumi. Imovie yahlulwe yazizahluko ezininzi zonxibelelwano. Iinkwenkwezi zabadlali abaziwayo abanjengo: Uma Thurman, John Travolta, uSamuel L. Jackson noBruce Willis.
Iploti uxela ibali likaVincent noJules: amadoda amabini abethayo. Basebenzela umgulukudu oyingozi ogama lingu UMarsellus Wallace, onomfazi omangalisayo ogama linguMia. UMarsellus uxelele abo babethele kuye umsebenzi wokubuyisa ibrifkheyisi engaqondakaliyo ebiwe kuye, kunye nokunyamekela umfazi wakhe xa engekho edolophini.
UMia uyintombazana entle enesithukuthezi ngobomi bakhe bemihla ngemihla, lo nto Uthandana noVincent: Omnye wabasebenzi bomyeni wakhe! Ubudlelwane phakathi kwaba babini bubonisa ingozi enkulu ukuba umyeni ufumanisa ngale meko. Ngaphandle kwezilumkiso zikaJules, uVincent uvumela iimvakalelo zakhe ngoMia ukuba zikhule kwaye azonwabise, kuba enye yazo ibeka ubomi bakhe emngciphekweni!
Kwenye yeendlela zabo zokuhamba esixekweni, baya kwiklabhu apho esinye seziganeko ezibonakalayo zefilimu zenzeka ngomdaniso ongaphandle emgangathweni.
Ngestayile seTarantino, ibali liyaqhubeka egcwele ubundlobongela, ukubulala, iziyobisi kunye noburharha obumnyama. Ukuba awukayiboni, ngekhe uyiphose!
Esi sihloko sihambelana nokubuyiswa kwefilimu eyakhutshwa ngo-1932. Inguqulelo entsha yakhutshwa ngo-1983 yaza yadlala inkwenkwezi uAl Paccino. "Isikali" cokanye ihambelana nenye yeefilimu ze-mafia ezenza eyona mpikiswano inkulu: Ilinganisiwe "X" eUnited States ngomxholo wayo ophezulu wobundlobongela!
UTony Montana, ophambili, ngumfuduki waseCuba odlulileyo odidekileyo ohlala eUnited States. Ukudinwa kobomi obugcwele yintlupheko kunye nokusikelwa umda, uTony ugqiba kwelokuba aphucule umgangatho wobomi bakhe ngazo zonke iindleko. Kungenxa yoko le nto yena nomhlobo wakhe uManny beqala ukuthatha imisebenzi engekho mthethweni kubaphathi behlokondiba lendawo. Kungekudala amabhongo akhe akhula kwaye Uqala ishishini lakhe lokuthengisa iziyobisi kunye nokwakha ukuhanjiswa okuqinileyo kunye nenethiwekhi yorhwaphilizo. Waba ngomnye wabarhwebi beziyobisi ababalulekileyo kuloo mmandla!
Xa ephumelele, ugqiba kwelokuba aphumelele intombi yezinye zeentshaba zakhe. UGina, odlalwa nguMichelle Pfeiffer, ungumfazi ongumfanekisomtshato otshata noTony kungekudala.
UTony uba likhoboka lecocaine kwaye ukufumanisa kunzima ngakumbi ukulawula umsindo wakhe. Uqala ukonyusa uluhlu lweentshaba kwaye abe neengxaki zomtshato. Ekuqhubekeni kwebali, uninzi lweziganeko zongquzulwano kunye neentshaba zombutho zenzeka.
Awungekhe uyiphose le bhanyabhanya, ingaphakathi kwe-10 ephezulu yokukhethwa kweZiko laseMelika laseMelika!
Kwabaziwayo UMlawuli uMartin Scorsese; Sifumana enye yeefilimu ze-mafia zamva nje ezakhutshwa ngo-2006. Kwidrama yokunqumamisa amapolisa, sifumana uLeonardo Di Caprio kunye noMat Damon njengabadlali abaphambili. Ukunduluka kuphumelele u-Oscar ngowona mfanekiso ubalaseleyo kuloo nyaka!
Indawo yesiqwenga kubomi be- abantu ababini abangena kumacala achaseneyo: Ipolisa langena kwi-mafia kunye ne-mobster yangena emapoliseni. Indibaniselwano yeziqhushumbisi igcwele umdlalo weqonga, ukurhanela kunye neqhinga! Umlingisi we-eccentric uJack Nicholson unikezela inani elikhulu lezinto eziza kuxhokonxa iimvakalelo zakho ngokudlala ngendlela ekhethekileyo njengoko edlala uFrank Costello. Ulihlokondiba elinegazi elineentshaba ezininzi kwaye elinobudlelwane obusondelelene kakhulu nomnye waba baphambili, umhlola evela kwiSebe lamaPolisa laseBoston.
Kukho unxantathu wothando ekhokelwa ngugqirha wezengqondo ovela kwisebe lamapolisa.
Sifumana ukujija okungalindelekanga ebalini kunye nezinto ezininzi ezenziwayo, yiyo loo nto ithathwa njengeyona bhanyabhanya ibalaseleyo yohlobo. Ungayichazanga eyokuba iScorsese ihlala isiqinisekiso somboniso bhanyabhanya kunye nokubulawa okukodwa!
Izinto ezingafunekiyo zikaEliot Ness
Ikhutshwe ngo-1987, le filimu enxulumene ne-mafia ibalisa ibali elichaseneyo: oko kukuthi ingxelo yamapolisa yento eyenzekayo kumlo wolwaphulo-mthetho olulungelelanisiweyo. Inkwenkwezi uKevin Costner kunye nomlingisi ophambili uquka uRobert de Niro, kunye noSean Connery.
Icebo sYenzeka eChicago ngexesha lobungangamsha behlokondiba laseMelika. Umlinganiswa ophambili ngu amapolisa umsebenzi wawo kukuqinisekisa ukuthintelwa, Ke uhlasela ibhar eAl Capone eyoyikekayo. Kuloo ndawo ufumana into engaqhelekanga emenza ukuba acinge ukuba amapolisa esixeko anyotywa ngabarhwebi; ukuze dThatha isigqibo sokuhlanganisa iqela eliza kukunceda udilize udonga lwenkohliso.
Amanani amakhulu e-cinema yama-XNUMXs enezinto ezininzi ezilindileyo!
Umdlali weqonga uDenzel Washington, le bhanyabhanya yembali ikuluhlu lwethu lweefilimu ze-mafia ezibalaseleyo kuba isekwe kwiziganeko eziyinyani kwaye siyawabona omabini amacala empumelelo ngokuhlala ngaphandle komthetho.
Inkqubo ye- Ibali likaFrank Lucas, omnye wabarhwebi abadume ngokuthengisa iziyobisi osweleke ngezizathu zendalo. U-Lucas wayenamaqhinga kwaye ekrelekrele, ke wafunda ukuqhuba ishishini kwaye Waqala ukuyila eyakhe inkampani apho wafaka yonke usapho ukuba wayevela kwimvelaphi ethobekileyo. U-Lucas udibana no-Eva, umfazi omhle awayegqiba naye ukutshata kwaye aqale usapho.
Kungekudala Baqala ukuhlala ngendlela e-eccentric ebamba ingqalelo yomcuphi ongenakonakala uRichie Roberts, idlalwe nguRussel Crowe. Ngokukhawuleza umcuphi uqala uphando olupheleleyo ngenjongo yokutyhila indoda enkulu enkulu ye-mafia ukuba imthabathe avalelwe.
Kuphuhliso lwefilimu esinokuyifumana Imiboniso yobundlobongela kunye nezenzo ezinkulu zorhwaphilizo ezisebenzisa i-mafia ukuqhubeka nokusebenza.
Sinokubona icala lomntu lobuqhophololo kule filimu, kodwa iingxaki azize ziyeke ukubaphazamisa. I-American Gangster iye yaba yinto ephambili kwabo bathanda i-Holywood mob movie!
Ezinye iiNdawo eziCetyiswayo zeMafia
Ukongeza kwezi zihloko zikhankanywe apha ngasentla, sifumana ezinye ezifanelekileyo kwaye zikhankanywe ngezantsi:
Indlela eya ekutshatyalalisweni
Imigulukudu yaseNew York
Ukufa phakathi kweentyatyambo
Khomba uthando olungenanto
Ukuhlutha: Iihagu neeDayimani
Uluhlu alupheli! Kukho izihloko ezingenakubalwa zolu hlobo oluhlala lusinika imiboniso emikhulu yezenzo, ukuthandabuza, ubunewunewu kunye nogonyamelo. Umgaqo ophambili kukubulala ukuze usinde!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndinike ixesha lokuphola » ngokubanzi » Iifilimu ezigqwesileyo zeMafia